Screen Capture Engine: ógbè software iji jikọọ bots nke ThatsLuck
Screen Capture Engine bụ sọftụwia m mepụtara iji mee ka usoro dị mfe maka ijikọ bots m na ntanetị dị iche iche n'ịntanetị dị ka o kwere mee.
Ekele maka ngwanrọ a nke ị nwere ike ibudata ozugbo na njikọ dị na ala nke ibe ahụ, ị ​​nwere ike hazie tebụl roulette nke nyiwe dị iche iche n'ịntanetị (ezigbo egwuregwu, Evolution, Netent, wdg) na obere usoro dị mfe.
Rụọ ọrụ software
Ozugbo ebudatara faịlụ zip na desktọpụ gị, ị dị nnọọ nwere ẹkedori executable na usoro ihe omume ga-ozugbo njikere iji.
Naanị ihe ị ga-eme bụ ịbanye na ebighị koodu na ị na-ahụ na ala nke a na peeji nke.
Dị ka ị na-ahụ nseta ihuenyo nke Screen Capture Engine ọ nwere ọrụ njide niile enyere.
Ojiji ahụ dị mfe ma ị ga-enwe ike ịghọta uru ya ozugbo ọ bụrụ na ịzụrụla bot ahụ Roulette Bias Sniper, ojiji nke - site na mbipute 8.0 n'ihu - na-enye njikọ na igwe onyonyo ọhụụ a site ThatsLuck.
Ọ bụrụ na ị zụtara ụdị mbụ nke Roulette Bias Sniper (ma ọ bụ sọftụwia ọzọ) echegbula, mmelite niile nke ThatsLuck ha na-enwere onwe ha mgbe niile, ma ọ bụrụ na i mebeghị otú ahụ, budata ụdị ọhụrụ ahụ ma rụọ ọrụ ya na koodu dị n'aka gị, nke ahụ na-adị irè mgbe niile!
Maka nhazi ngwanrọ na njikọta na Roulette Bias Sniper (ma ọ bụ ya na bots ndị ọzọ mgbe ha dị), ị nwere ike ịlele vidiyo na ọwa ► YouTube.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na enwere obi abụọ ma ọ bụ ajụjụ ọ bụla gbasara iji mmemme a, ị nwere ike ịkpọtụrụ m site na itinyeju ► ụdị nkwado.
AKWODKWỌ AKW FREEKWỌ AKW .KWỌ
Nbudata Nbudata	SCEngine2.zip - 2 MB
Ntọala 2 Xls